एजेन्सी जेठ २४ – पछिल्लो पटक लण्डन हमलाका केही संदिग्धको पहिचान भएको छ । संदिग्धमा एक इटालियन जिहादी पनि समावेश थिए – युसुफ जाग्बा । युसुफकी आमा वलेरियाले घटनामा छोराको संलग्नता भएको थाहा पाएपछि छोरा नराम्रो संगतमा परेको बताएकी छिन् । उनले भनिन्, ‘मेरो छोरालाई इन्टरनेट र उनका साथीहरुले बिगारेका हुन् । यो सबै नराम्रो […]
मेरो आदेशपछि कतारबाट अलग्गिए मुश्लिम देशः ट्रम्पको दाबी
बीबीसी जेठ २४ – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले आफ्नो आदेशपश्चात् आतंकवाद समर..
सिरियामा भएको हवाई आक्रमणमा तीस मारिए
दमासकस, जेठ २३ – सिरियाको उत्तरी सहर रक्वामा अमेरिकी आवद्ध सुरक्षा फौजले सोमबार ..
१सय ५० जनाले ज्यान गुमाए काबुल ट्रक बम विस्फोटमा
काबुल, जेठ २२ – काबुलमा विभिन्न देशको राजदूतावास र राजदूतावासका कर्मचारीको वासस्..
अरबी मुलुकका समस्या सुल्झाउन कुवेतले देखायो चासो
दुबाई (संयुक्त अरब इमिरेट्स), जेठ २३ – विगत तीन दिनमा एकदमै नाटकिय ढङ्गबाट गल्फक..
कतारलाई एक्ल्याइँदाका यस्ता छन् पाँच असर
बीबीसी / साइमन एत्किन्सन जेठ २३ – साउदी अरब, इजिप्ट, बहराइन, संयुक्त अरब इमिरेट्स, लिबिया, यमन र माल्दिभ्सले कतारसँगको कूटनीतिक सम्बन्धको अन्त्य गरेका छन् । तर यसले कतारको अर्थतन्त्र र त्यहाँ व्यवसाय गरेर बसिरहेकामाथि कस्तो असर पुर्याउला ? अरेबियन प्रायद्वीपको उत्तर पूर्वी तटमा रहेको २७ लाख जनसंख्या भएको उक्त देश विभिन्न कारणवश ..
यी पाँच देशसँग छैन आफ्नो आर्मी, लिन्छन् अरुसँग उधारो
एजेन्सी जेठ २३ – कुनै देशको शक्तिको अन्दाज त्यसको सैन्य ताकतबाट लगाउन सकिन्छ । जुन देशको सेना जति ठूलो हुन्छ त्यसलाई संसारको त्यति नै शक्तिशाली देश भनिने गरिन्छ । तर यस्ता देश पनि छन् जसको आफ्नो सेना छैन । आज हामी यस्तै पाँचवटा देशबारे जानकारी दिदैछौं । कोस्टा रिकाः यो देशसँग आफ्नो कुनै सेना छैन […]
पाँच हजार वर्ष पुरानो हत्या केसको पुलिसले अहिले गरिरहेछ अनुसन्धान
बीबीसी जेठ २३ – उत्तर इटलीको दूरदराज इलाकमा ५ हजार ३ सय वर्ष पहिले एक पुरुषको हत्या भएको थियो । अहिले पुलिसले उनको हत्याबारे अनुसन्धान थालनी गरेको छ । वास्तवमा ओएट्जटेलर आल्प्सको इलाकामा ओएटजी नामका यी हिममानव (आइसम्यान) को पिठ्युँमा कसैले तीर हानेका थिए जसका कारण उनको मृत्यु भएको थियो । उनको शव बरफमा वर्षौंसम्म […]
अरबको आकाशमा अब उड्ने छैन कतारी विमान, यस्तो हुनेछ असर
बीबीसी जेठ २३ – इजिप्ट र साउदी अरबले कतारी विमानमाथि आफ्नो हवाई क्षेत्रमा उडान भर्नका लागि प्रतिबन्ध लगाएको छ । योभन्दा पहिले कतारमाथि अतिवादीलाई बढावा दिएको आरोपमा ६ अरब देशले उक्त देशसँग आफ्नो कूटनीतिक सम्बन्ध तोडेको छ । यसमा साउदी अरब, इजिप्ट, बहराइन, यमन, लिबिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) समावेश छन् । साउदी अरब, [&helli..
लण्डन हमलाका दुई आतंकवादीको नाम सार्वजनिक
एजेन्सी लण्डन, जेठ २३ – शनिबार राती लण्डनमा आतंकवादी आक्रमण गर्ने तीन जनामध्ये दुई जनाको नाम प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक गरिएकामध्ये २७ वर्षीय खुरमान बट बार्किङका निवासी थिए । उनीबारे प्रहरी र एमआई फाइभलाई जानकारी भए पनि आक्रमणबारे कुनै सूचना नभएको बताइएको छ । त्यस्तै दोस्रो आक्रमणकारी पनि बार्किङकै ३० वर्षीय राचिद रे..
लन्डन आक्रमणको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासचिवद्वारा निन्दा
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, जेठ २२ – मध्य लन्डनमा भएको दुईवटा आतङ्ककारी आक्रमणको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासचिव एन्टोनीयो गुटेर्रेस्ले आइतबार कडा शब्दमा निन्दा गरेको छ । उनले यस आक्रमणमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिको परिवारलाई समवेदना व्यक्त गर्नुको साथै घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुभएको महासचिवका प्रवक्ता स्टेफान डुजार्रिकद्वा..
अफगानिस्तानको एक गाउँमा झडपमा तेह्रको मृत्यु
कुन्दुज (अफगानिस्तान), जेठ २२ – अफगानिस्तानको उत्तरी प्रान्त कुन्दुजको इमाम साहिब जिल्लामा अवस्थित एक जाँच चौकीमा तालिवान आतङककारी समूह र सुरक्षाबलबीच भएको भडपमा परी १० आतङ्ककारी सहित १३ को मृत्यु भएको जिल्ला गभर्नर अमानु दिन क्युरिसीले बताएको छ । यस झडपमा तीन सुरक्षाकर्मीले पनि ज्यान गुमाउनु परेको छ । इमाम साहिब जिल्लामा आइतबार..
लण्डन हमलापश्चात् फेसबुकले लियो यो ठूलो निर्णय
एजेन्सी जेठ २२ – लण्डन हमलापछि फेसबुकले आतंककारीहरु विरुद्ध ठूलो कदम उठाउने भएको छ । शनिबार राती लण्डनमा भएको आतंककारी हमलापछि फेसबुकले एक बयान जारी गर्दै यसबारे जानकारी दिएको हो । यस्तै, उक्त हमलापछि बेलायतकी प्रधानमन्त्री टेरेसाले फेसबुक, गूगल र ट्वीटरजस्ता इन्टरनेट फर्ममार्फत कारवाहीको माग गरेकी छिन् । लण्डनमा पछिल्लो पटक भएक..
गर्मीले छटपटाएको घोडा कारको सिसा तोडेर भित्र छिर्यो
एजेन्सी जेठ २२ – गर्मीले आफ्नो ताण्डव देखाइरहेको छ । यसैबिच जयपुरको प्रचण्ड गर्मीमा सुरुमा त एक कार र घोडा एक आपसमा ठोक्किए त्यसपछि घोडा कारभित्र छिर्यो । त्यसपछि अचानक मानिसहरुबिच कोकोहोलो मच्चियो । आइतबार जयपुरमा एक कार र घोडा एक आपसमा नमज्जाले ठोक्किए । ठक्कर यति तेज थियो कि घोडा कारको सिसा तोडेर भित्र […]
साउदी अरबसमेत चार देशले कतारसँग सम्बन्ध तोडे, आतंकवादलाई समर्थन गरेको आरोप
एजेन्सी जेठ २२ – साउदी अरब, बहराइन, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) र इजिप्टले कतारसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध तोडेका छन् । यी देशले कतारमाथि आतंकवादलाई समर्थन गरेको आरोप लगाएका छन् । यसैबिच अबु धाबीको इतिहाद एयरलाइन्सले कतारको आफ्नो सबै उडानलाई रद्द गरेको छ । साउदी अरबका एक अधिकारी भन्छन्, ‘हामी आफ्नो छिमेकी मुलुक कतारसँगको सम्बन्ध समाप..
एजेन्सी जेठ २२ – उत्तरप्रदेशको बरेलीमा ट्रक र बस एकआपसमा ठोक्किएका छन् । ठक्करपश्चात् बस र ट्रक दुबैमा आगो लागेको छ । बसमा सवार २२ यात्रुको जलेर मृत्यु भएको छ । दुर्घटनामा १५ भन्दा बढि घाइते भएका छन् । उनीहरुलाई अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ । दुर्घटनापछि ट्रकका ड्राइभर फरार छन् । घटना बरेलीको बिथरीचैनपुर एरियाको […]
राष्ट्रसंघको नाकाबन्दीलाई ‘तुच्छ’ भन्दै उत्तर कोरीयाले दियो यस्तो जवाफ
जेठ २२, एजेन्सी – उत्तर कोरियाले संयुक्त रास्ट्रसंघले आफूविरुद्ध लगाएको नाकाबन्दीलाई तुच्छ गतिबिधि भन्दै आफ्ना आणविक तथा क्षेप्यास्त्र परीक्षण कार्यक्रमलाइ अघि बढाउने भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदले अमेरिकाद्धारा तयार पारिएको संकल्प प्रस्तावलाई शुक्रबार एकमतले पारित गर्दै उक्त कोरियाका केही उच्च अधिकारी तथा संस..
आइएसको कब्जाबाट १४ सय बर्ग किलोमिटर क्षेत्र नियन्त्रण मुक्त
दमासकस, जेठ २१ – इस्लामिक स्टेट्स (आइएस) लडाकूहरुले कब्जामा राखेको सिरियाको झन्डै १४ सय बर्ग किलोमिटर क्षेत्र सिरियाली सेना र अन्य सुरक्षाकर्मीको संयुक्त प्रयासमा मुक्त भएको छ । गत चौविस घन्टाको अवधिमा सरकारी सुरक्षा फौजले पाल्मीरा सहर क्षेत्रमा आइएस लडाकू विरुद्धको सफलता प्राप्त भएको साना समाचार संस्थाले शनिबार जनाएको छ । सिरिय..
भारतमा बाढीमा परेका २७ जनाको उद्धार
नयाँ दिल्ली, जेठ २१ – भारतको कर्नाटक प्रदेशमा बाढी पहिरोमा परेका २७ जना मजदुरलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीले आइतबार उद्धार गरेका छन् । वर्षाका कारण उद्धार तथा खोजीकार्य केही समयका लागि स्थगत गरिएको छ । तर पनि उद्धारका लागि २४ जनाको टोली खटिएको छ । भारतको सरकारी सञ्चार माध्यम अल इन्डिया रेडियोले उद्धारका लागि उद्धारकर्ताले हेलिकोप्टरसम..
क्यासिनोमा हमला गरेर ३६ जनाको ज्यान लिने व्यक्ति आतंककारी नभई ऋणमा डुबेका जुवाडे
हिन्दुस्तान टाइम्स जेठ २१ – फिलिपिन्सको राजधानीमा अवस्थित क्यासिनोमा ओगो लगाएर ३७ जनाको हत्या गर्ने व्यक्ति जुवाका कारण नमज्जाले ऋणमा डुबेका तीन सन्तानका बुवा भएको पुलिसले जानकारी दिएको छ । ‘हामी दोहोराउन चाहन्छौं कि उक्त घटना आतंककारी होइन । यो एक व्यक्तिको आक्रमण हो,’ मनिला पुलिसका प्रमुख अल्बाएल्डेले आरोपीको परिचय खुलेपछि पत्..
देवतालाई खुसी बनाउन काटेका थिए आफ्नै लिङ्ग, अदालतले दियो मृत्युदण्डको सजायँ
एजेन्सी जेठ २१ – अमेरिकाको नेबरास्कामा आफ्नो व्यवहारका कारण लामो समयदेखि चर्चामा रहेका सनकी हत्यारा निक्कलो जेन्किन्सलाई अदालतले मृत्युदण्डको सजायँ सुनाएको छ । उनको कृत्यलाई अदालतले जघन्य करार दिएको छ । आफ्नै लिंग काटेः ३० वर्षका निक्कोले आफ्नै लिङ्ग काटेका थिए । यस्तो उनले देवतालाई चढाएका थिए । उनको यस्तो व्यवहारले देवता खुसी ह..
बुवा बन्ने आशामा यी व्यक्तिले बली दिए छिमेकीकी ७ महिने छोरी
एजेन्सी जेठ २१– हामी आधुनिक समाजमा बाँचिरहेका छौं । हामी कम्तीमा पनि यस्तो सोच्छौं । तर केही घटनाका कारण हामी यो सोच्न बाध्य हुन्छौं कि के साँच्चै हामी २१ औं शताब्दिमा छौं त ? पूर्वी भारतको झारखण्डस्थित एक व्यक्तिले सात महिने बालिकाको बली दिएका छन् । यसो गर्दा भगवान आफूसँग खुसी हुने र उनी बुवा […]
लण्डन हमलाः तीन हमलाकर्तालाई गोली हानियो, अहिलेसम्म थाहा भएका ११ विशेष जानकारी
बीबीसी जेठ २१ – सेन्ट्रल लण्डनको इलाकामा रहेको लण्डन ब्रिज र बरो मार्केटमा शनिबार राती भएको हमलामा मारिनेको संख्या ६ पुगेको छ । यसका साथै, बेलायतका पुलिसको दाबी अनुसार तीन हमलाकर्तालाई गोली हानी हत्या गरिएको छ । सेन्ट्रल लण्डनको इलाकामा रहेको लण्डन ब्रिजमा पैदल हिँडिरहेका मानिसहरुमाथि एक भ्यानमार्फत हमला भयो । लण्डन ब्रिज नजिकै ..
चरमपन्थी हमलाले थर्थरायो बेलायतः तीन महिनामा तीन हमला
एजेन्सी जेठ २१ – शनिबार राती लण्डनको पुलमा एक अनियन्त्रित भ्यानले पैदल हिँडिरहेका मानिसहरुलाई टक्कर दियो । उक्त घटनामा करिब २० जना घाइते भएका छन् भने एकको मृत्यु भएको छ । घटनाको सूचनापश्चात् पुलिस भारी संख्यामा घटनास्थलमा पुगेको छ । लण्डन ब्रिजमा आवतजावत रोकिएको छ । उक्त घटनालाई लण्डन पुलिसले चरमपन्थी हमलाको संज्ञा दिएको छ [&hel..